Global Voices teny Malagasy » Maneran-tany: Zarao Amin’izao Tontolo Izao ny Fiainanao Ny 11-11-11 · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Aogositra 2011 10:56 GMT 1	 · Mpanoratra Juliana Rincón Parra Nandika Candy
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Afrika Mainty, Amerika Avaratra, Azia Afovoany sy Kaokazy, Azia Atsimo, Azia Atsinanana, Eoropa Afovoany & Atsinanana, Eoropa Andrefana, Oseania, Etazonia, Fampandrosoana, Hafanàm-po nomerika, Mozika, Sarimihetsika, Saripika, Zavakanto & Kolontsaina
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny tatitra manokana ataonay momba ny Fivoarana manerana izao tontolo izao 2011 .
Inona no hataonao amin'ny 11 Novambra 2011? Zarao amin'izao tontolo izao izany amin'ny alalan'ny 11Eleven Project  [Tetikasa 11iraika ambin'ny folo] ary manampia amin'ny fanatontosana ireo Tanjon'ny Firenena Mikambana ho Fampivoarana ny Taonarivo!
Manomboka amin'ny 11 Aogositra dia afaka misoratra anarana ianao ary mandray anjara  amin'ny fandraketana ampahany amin'ny fiainanao amin'ny 11 Novambra, na amin'ny alalan'ny lahatsary izany, na sary na mozika. Afaka misoratra anarana ho Masoivoho koa ianao, mampita ny hafatra any amin'ny tanàna misy anao  ary manamarina fa nandraay anjara tamin'ny tetikasa ny fiaraha-monina misy anao.
Araho ny Tetikasa 11Eleven ao amin'ny Facebook  sy Twitter  hahazoanao fanampim-baovao momba ny fivoaran'ny tetikasa raha tianao. Dia amin'ny 11 Novambra 2011, (11/11/11) raiso ny solosainao, finday, kamera na fandraketam-peo ary manaova fanadihadiana momba ny zava-dehibe indrindra nitranga tamin'ny andronao amin'ny tenim-pirenena tianao. Aorian'ny 11 Novambra, alefaso  ny lahatsary, sary na mozika ary hamboarin'ny Tetikasa 11Eleven izany ho sarimihetsika; ny 21 Septambra 2012, halefa mandritra ny Andro Maneran-tany ho an'ny Fandriampahalemana ankalazain'ny Firenena Mikambana izany.
Global Voices  dia miara-miasa amin'ny Tetikasa 11Eleven  amin'ny fampahafantarana ireo Tanjon'ny Firenena Mikambana ho an'nyFampivoarana ny Taonarivo (MDGs ). Amin'ny volana Novambra, ny 11/11/11 hasainay ny olom-pirenena eran'izao tontolo izao hanampy hanamboatra ny sary mampiseho ny olombelona amin'ny alalan'ny: sary, lahatsary, raki-peo, ary lahatsoratra blaogy momba io andro io. Tsy voatery ho misy fifandraisany amin'ny MDG izany, ny zava-dehibe dia ny fanehoan'izany ANAO. Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba ireo olana valo goavana momba ny fampivoarana sy ireo fepetra hamahàna izany hatramin'ny 2015, ato amin'ny Pejin'ny Tatitray manokana. 
Manentana ny rehetra ihany koa izahay hitoraka blaogy momba ny “Tiako ho toetran'izao tontolo izao afaka 100 taona” mifandraika amin'ny MDGs. Manomeza rohy mankany amin'ny pejinay Tanjona ho Fampivoarana ny Taona Arivo , ka hataonay anatin'ny lisitra ato koa ny lahatsoratrao. Ka miaraha aminay amin'ny fankalazàna ny maha-olombelona amin'ny 11/11/11.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/08/12/21009/
 Fivoarana manerana izao tontolo izao 2011: https://globalvoicesonline.org/un-millennium-development-goals-in-2011
 11Eleven Project: http://11elevenproject.com/en/what-is-the-11eleven-project/
 mandray anjara: http://11elevenproject.com/en/participate/
 tanàna misy anao: http://11elevenproject.com/en/map/